Ciidamada Kenya ee kusugan gudaha Soomaaliya oo helay Mushaharkii ka maqnaa mudo sanad ah – Radio Daljir
Ciidamada Kenya ee kusugan gudaha Soomaaliya oo helay Mushaharkii ka maqnaa mudo sanad ah
Abriil 22, 2019 7:19 b 0
Cidamada Kenya ee qaybta ka ah howlgalka Sooomaaliya ayaa dib u helay mushahar ka maqnaa mudo Todoba bilood ah, waxaana maanta lagu wareejiyay lacagtaasi madaxda ugu saraysa dalkaasi.
lacagtan ayaa gaaraysay 3.7 milyan oo Shilinka Kenya ah.
Dowladda Kenya ayaa cabashooyin badan u gudbisay Qaramada Midoobay iyo Midowga Yurub kadib markii ciidamadooda kaga sugan gudaha Soomaaliya muddo sanad ka badan ay san heli wax mushaar ah.
Midowga Europe ayaa bixiya Lacagata ugu badan ee uu ku shaqeeyo Howlgalka AMISOM, QM ayaa sidoo kale qayb mug leh ka bixisa qaaraanka AMISOM ay uga howlgasho Soomaaliya.
Ciidamada AMISOM ayaa Soomaaliya ku sugan mudo ku siman haatan ilaa iyo 10 sano, mana jirto guulo lataaban karo oo ay ka gaareen ladagaalanka Ururka Al-shabaab.
FARRIIN kahortagga kufsiga carruurta iyo shaacinta cudurka ‘Pedophilia’ iyo cudurqabaha (Pedophile)
Faah Faahi: Tirada dadkii ku dhintay Qaraxyadii ka dhacay dalka SiriLanka oo korortay